Maxay Al- Shabaab u beegsadaan Mashaariicda Turkigu ay ka fulinayaan Soomaaliya?
“Turkiga wuxuu ku guuleystay inuu dhiso ciidamo Soomaali ah oo dagaallo ba’an la galay Al-Shabaab, gaar ahaan howlgalladii ka dhacay Shabeellaha Hoose”, sidaas waxaa yiri Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga. […]
Maamulka G. Banaadir oo qabanqaabinaya Isku soo bax-balaaran oo looga soo horjeedo Al- Shabaab.
MUQDISHO(P-TIMES)- Dawladda Faderaalka Soomaaliya ayaa ka qabanqaabinaysa magaalada Muqdisho ee caasumada dalka, Banaanbax balaaran oo looga soo horjeeda kooxda Al- Shabaab, kuwas oo inta badan geysta weerarada Argagixiso ee ka dhaca gudaha dalka. Maamulka Gobolka […]
Maxay ka wada hadleen Ergayga QM u qaabilsan Soomaaliya & Safiirka Imaaraatka Carabta ee Soomaaliya oo ka dhacay Muqdisho?
MUQDISHO(P-TIMES) – Kulan gaar ah ayaa dhexmaray Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midowbay u qaabilsan Soomaaliya James Swan iyo Safiirka dawladda Imaaraatka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Cuthmani oo ka dhacay xarunta safaarada Imaaraatka ay […]
Baarlamaanka Soomaaliya oo meelmariyey Miisaaniyadda 2020-ka 7 Hadalo laga jeediyey.
MUQDISHO(P-TIMES)- Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo maanta yeeshay kulan wadajir ah ayaa si rasmi u meelmariyey Miisaaniyadda dawladda Faderaalka ee 2020-ka, oo ay horey u ansixiyeen xubnaha golaha Wasiiradda, waxaana Miisaaniyada ku jira kordhinta lagu sameeyey […]
December 31, 2019 shiine maxamed 0
DAAWO: Xildhibaan Puntland ah oo Warbixino xasaasi ah banaanka keenay, PUNTLAND MAKA BADBAADI DOONTAA BARAARUG DADWEYNE?
December 31, 2019 NEWS 1
Puntland maka badbaadi kartaa baraaruga bulshadda? waa ciwaanka maqaal dheer oo uu qoray Xildhibaan Maxamed Ismaaciil (Siibad) oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee Punland, Siibad waa qoraa inta badan wax ka qoray arrimo muhiim ah, […]
Puntland oo ku mashquulsan arrimaha Doorashada Galmudug & Xog laga helay.
GAROOWE(P-TIMES) – Puntland ayaa ilgaar ah ku haysa arrimaha doorashooyin kasocda Galmudug, iyadoo si taxadar leh ula socota natiijada ka dhalan karta doorashooyinkaas oo ay xooga saarayso sidii ay u adkeysan lahayd saameynteeda ku wajahan […]
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta leh Kulan wadajir ah & Welwelka Miisaaniyada 2020-ka oo taagan.
MUQDISHO(P-TIMES) – Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya oo ka kooban labada Golle ayaa dood ka leh arrimaha ku saabsan Meelmarinta Miisaaniyada dawladda ee sannadka 2020-ka oo ay tahay in la ansixiyo ka hor 1da Bisha January oo […]
AKHRISO: Puntland oo ka hadashay Qaraxii lagu eedeeyey dawladda Imaaraatka Carabta, shaacisayna Mawqifkeeda.
December 31, 2019 NEWS 3
GAROOWE(P-TIMES)- Puntland ayaa markii koowaad si aan toos aheyn uga hadashay weerarkii lagu gumaaday Shacabka Soomaaliyeed, kaas oo ay Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Soomaaliya ku cadeysay in ay ka dambeysay dawlad Shisheeye, laakiin aysan magaceeda […]
2019-kii Mareykanka oo Duqeymihii ugu halista badnaa ka fuliyey Soomaaliya.
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu amray bilowgii sannadka maanta dhamaanaya in la kordhiyo weerarada duqeymaha diyaaradaha ee laga geysanayo Soomaaliya, horey waxay ugu baahnaayeen fasax Madaxweyne iyo kan dawladda Soomaaliya, laakiin hadda intaasba […]
M/weynaha Puntland oo kusii jeeda Boosaaso & Caqabado waa weyn oo horyaala safarkiisan.
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo lafilayay in uu socdaal kutago magaalada Gaalkacyo todobaadkan ayaa baajiyey, isagoo ku sii jeeda magaalada xarunta u ah Ganacsiga ee Boosaaso, sababo la xariira ammaanka iyo kulamo […]
Al- Shabaab oo sheegatay Qaraxii lagu xasuuqay Shacabka Soomaaliyeed & Enjineerada Turkiga.
MUQDISHO(P-TIMES) – Al- Shabaab ayaa maanta sheegatay Qaraxii Ex Control Afgooye oo lagu weeraray Shacab Soomaaliyeed & Enjineero u dhashay dalka Turkiga, waxayse Al Shabaab sheegeen in ay iyagu beegsadeen Enjineero u dhashay Turkiga iyo […]
Gabar Soomaali ah oo loo magacaabay Wasiirka Caafimaadka ee dalka Itoobiya.
December 30, 2019 NEWS 4
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha dalka Itoobiya Abiye Ahmed ayaa u magacaabay Saxarla Abdilahi Bahdoon oo kasoo jeeda Ismaamulka Soomaali State ee dalkaas Itoobiya wasiirka caafimaadka ee dawladda Federaalka Itoobiya, ka dib markii uu jagadaas iska […]
DHAGEYSO: Maxaabiis ku xirneyd Xabsiga Muqdisho oo katirsanaa Al- Shabaab oo baxsaday.
Saddex maxbuus oo ku xirnaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa maanta baxsaday, sida ay sheegayaan warar ay heshay laanta Af-Soomaaliga ee VOA. Warka ayaa intaas ku daraya in mid ka mid ahaa maxaabiista dib […]
DAAWO: Shacabka G Mudug oo isku tashi ku dhisanaya Garoon diyaaradeed oo caalami ah & Dhagax cusub oo kale.
GAALKACYO(P-TIMES) – Magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo bandhigay goob loo asteeyey in ay noqonayso halka laga dhisayo Garoon caalami ah oo ay magaaladan yeelan doonto Mustaqbalka dhaw, waxaana dadkii ka qeybgalay kamid ahaa Isimadda gobalka […]
Mucaaradka Soomaaliya dood ka keenay wararka ku saabsan In Dal Shisheeye ka dambeeyey Qaraxii Ex Afgooye
MUQDISHO(P-TIMES) – War qoraal ah oo lagu baahiyey barta gaarka ah ee Nabadsugida iyo Sirdoonka ee Twitter-ka ayaa lagu sheegay in weerarkii lagu xasuuqay Shacabka Soomaaliyeed, uu ahaa mid ay ka dambeeyeen dawlado Shisheeye oo […]
DAAWO VIDEO SIR KALE:Imaraadka Qaabkee Uga Danbeeyey Weerarkii Qaraxa Muqdisho ? Maxaase Kasoo Kordhay
December 30, 2019 shiine maxamed 0
Sirdoonka Soomaaliya oo ku dhawaaqday in Qaraxii Ex-Afgooye ay dalal Shisheeye ka dambeeyeen.
December 30, 2019 NEWS 2
MUQDISHO(P-TIMES)- Taliska Sirdoonka iyo Nabadsugidda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in qaraxii kadhacay duleedka Muqdisho ay ka dambeeyeen dawladdo Caalami ah, waxaana sirdoonku ay sheegeen in ay hayaan macluumaad dheeraad ah. Warbixinta la baahiyey, waxay sheegaysaa […]
Wargaysyada dalka Turkiga kasoo baxa ayaa daabacay in xogo ay heleen ay muujinayaan in qaraxii dadka badan dhibaatadu kasoo gaartay ee 28 bishaan ka dhacay ex kontorool Afgooye ay ka dambeyso dawlada Imaaraatka Carabta oo […]
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes wuxuu helay macluumaad dheerad ah oo la xariira sababaha rasmiga ah ee loo fulin waayay xukunkii ay riday Maxkamadda sare ee Puntland, taas oo ahayd in dil lagu fuliyo sadex nin […]